Spotify dia mahatratra mpanjifa 144 tapitrisa ary mandalina ny fiakaran'ny vidiny | Androidsis
Spotify dia mahatratra 144 tapitrisa ny mpanjifa ary mianatra ny fiakaran'ny vidiny
Spotify dia nanambara ny tarehimarika fandraharahana nandritra ny telovolana farany, izay manomboka ny volana Jolay ka hatramin'ny septambra, manampy mpanjifa 6 tapitrisa vaovao, mahatratra 144 tapitrisa ny isan'ny mpanjifa miaraka amina mpampiasa 320 tapitrisa tanteraka raha manampy ireo izay mampiasa ny serivisy amin'ny doka natolotry ny sehatra soedoà.
Na izany aza, ny varotra doka, ary koa ny tombony azony tao anatin'izay telo volana lasa izay, dia tsy voalaza mialoha sy araka ny nampoizina, ny tsena dia namaly tamin'ny fihenan'ny vidin'ny fizarana. Manoloana ny fihenan'ny fidiram-bola mety hatao, ny vahaolana dia ny fampiakarana ny vidin'ny fisoratana anarana, hoy ny talen'ny CEO an'ny orinasa.
Fisondrotana ny vidin'ny sarany isam-bolana, avela Spotify mahazo karama ambony eny amin'ny tsena izay misy azy, fitomboana izay efa nosedraina tany amin'ny firenena avaratr'i Eropa sasany ary toerana izay tsy niainan'ny mpampiasa karazana fanilihana.
Ny lohan'ny orinasa Tsy nilaza an-tsipiriany ireo drafitra fampiakarana, izay anaovana izany fiakarana izany ary ohatrinona no mety ho dikan'ilay fiakarana, nefa ny zava-drehetra dia toa manondro fa ny fiakaran'ny vidim-piainana dia azo zahana amin'ny firenena rehetra.
Mino aho fa ny fiakarana sanda isan'ora no famantarana azo antoka indrindra tsy maintsy hamaritana ny fotoana ahafahantsika mampiasa ny vidiny ho toy ny vola hampiakatra ny orinasantsika.
Ny tondroin'ny CEO Spotify dia ny fampiasan'ny mpampiasa Spotify bebe kokoa isan'andro na tsia. Raha izy ireo, mahazo lanja bebe kokoa amin'ny vokatra ary noho izany dia tokony ho vonona ny handoa bebe kokoa izy ireo.
Mihevitra an'io Spotify io manolotra podcast an-tapitrisany izaoHo fanampin'ny fampiantranoana programa manokana am-polony dia azo iadiana hevitra mora foana fa nitombo ny sandan'ny mpanjifa.
Netflix dia nampiakatra ny vidin'ny fisoratana anarana tato anatin'ny taona vitsivitsy, ary, manohy manintona mpampiasa vaovao isaky ny telovolana. Ny fampiakarana ny vidin'ny serivisy dia zavatra mifandraika amin'ny serivisy ary mora raisin'ireo mpampiasa rehetra izay efa nankafy ny serivisin'izy ireo.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fampiharana Android » Spotify dia mahatratra 144 tapitrisa ny mpanjifa ary mianatra ny fiakaran'ny vidiny
Ny Galaxy S7 sy S7 Edge dia mandà ny ho faty: mahazo fanavaozana vaovao izy ireo
Ny lalao Android tsara indrindra hankafizana an'ity Halloween 2020 ity